Kauai Ocean View Condo kuMgangatho oPhezulu #356
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguBrad
Iyunithi #356 yiyunithi yomgangatho wesithathu enembono yolwandle kwicala elingasezantsi lekhompleksi. Kumgangatho ophezulu ojongene nesitiya segadi unokushiya isilayidi sivulekile ubusuku bonke kwaye uvumele isandi samaza ukuba ulale. Xa uvukile kuya kubakho i-chorus yeentaka ezitshisayo zokubulisa njengoko uyonwabela ikofu yakho yasekuseni kwi-lanai. Le yunithi ibonelela ngeebhedi ezimbini zokumkanikazi, ezolileyo kunye nokuzola okufunayo ngelixa ubonelela ngombono wolwandle kunye nokuseta okuzolileyo!
Ngamaxesha ngamaxesha, njengazo zonke iindawo zokuhlala ezininzi ezinobudlelwane, umsebenzi uyenzeka ukuba abanini bangazi kwaye abanalo ulawulo. Asiyi kuthweswa uxanduva lomsebenzi owenzeka kufutshane nekhompleksi nangaliphi na ixesha. Ukuba kukho umsebenzi esiwaziyo ngaphambi kwexesha, siya kuqiniseka ukuba sazisa iindwendwe ukuba loo msebenzi uya kusebenza kule condo okanye i-condos ejikelezileyo, ukuba kunokwenzeka kwaye ukuba saziswa ngexesha elifanelekileyo. Ngamanye amaxesha, akunjalo kwaye siyamangaliswa kukuva uhlobo oluthile lokulungiswa okanye umsebenzi owenziwayo. Ngokugcina le yunithi kwaye uvumelane nemigaqo kunye neemeko kunye nogcino, uyaqonda ukuba asiyi kuthwala uxanduva lwezo ntlobo zeemeko kwaye akukho mbuyiselo okanye utshintsho lwegumbi luya kwenziwa, ngaphandle kokuba uhlobo lomsebenzi luchaphazela ngokubonakalayo iyunithi ethile oyiyo. ukuhlala kuyo ukuze kuhlalwe kuyo.
Umsebenzi weLanai/patio Spalling:
Iqela labasebenzi liza kusebenza ukusuka ngentsimbi yesi-8am ukuya kweyesi-5pm phakathi evekini kuphela. Ukulungiswa kwe-spalling kubandakanya ukugrumba i-rebar endala kwi-lanai (ipatio), ukufakela i-rebar entsha, kwaye emva koko kuya kugalelwa isamente entsha. Inqaku leGM lingokulandelayo:
Emva kokwenza uhlolo kuyo yonke ipropathi, kuye kwafunyaniswa ukuba lanais ezininzi zichatshazelwa ngumonakalo okhoyo. Olu hlobo lomsebenzi wokulungisa luya kufuna ukuba iiyunithi ezithile kwizakhiwo ezahlukahlukeneyo zivalwe ngamaxesha ahlukeneyo kwisithuba seeveki ezintlanu ukususela ngo-Aprili 1, 2022 ukuya kutsho kuAprili 29, 2022. Nceda uqaphele ukuba ubude bexesha lale projekthi yokulungisa luqikelelo kwaye kwandiswe ngokuxhomekeke kwimozulu kunye nobunzima bokulungisa. Bonke abanini/iindwendwe kufuneka zazi ukuba umsebenzi wokugalela uza kuqhubeka ngeli xesha. Ke ngoko, amanqanaba omsebenzi, uthuli kunye nengxolo aya kuba phezulu kunesiqhelo kwipropathi.
Iiyunithi ezisetyenzwayo ngeli xesha leprojekthi yile: 118, 123, 130, 133, 134, 144, 156, 205, 209, 215, 217, 218, 221, 222, 223, 229, 230, 32, 32 . , 337, 338, 339, 342, 343, 344, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 358, 359, 361, kunye nama-365.
Izakhiwo ezibini ezithe ngqo eziselunxwemeni ziya kusetyenzwa kuqala, ukuqala nge-1 ka-Epreli kwaye kufuneka zihlale malunga neeveki ezimbini. Ezinye izakhiwo kwikhompleksi ziya kuqalisa malunga neeveki ezi-2 kamva kwaye kufuneka zihlale malunga neeveki ezi-2 ukuya kwezi-3.
Iprojekthi yeNdlela yeBhayisekile:
Indlela entsha yebhayisekile eya kunaba ukusuka kwicala elingasezantsi leSakhiwo saseMolokai ukujikeleza ukuya ngaphambili kwaye ecaleni kweZakhiwo zeKauai kunye neNiihau (phakathi kolwandle kunye nezo zakhiwo ezithe ngqo eziphambi kolwandle) iya kuthatha indawo yendlela ekhoyo yokuhamba. Lo msebenzi unokuba phezulu ngamanye amaxesha kwaye unokuphazamisa amava eendwendwe ngexesha lemini.
Iprojekthi yeNdlela yeBhayisekile: (ihlaziywe 3/10/21):
Ibhodi iyaqhubeka nokusebenza kunye ne-County of Kauai kwisicwangciso sendlela yebhayisekile ukusuka kwi-easement ecetywayo phakathi kwe-Islander kwi-Beach kunye ne-Kauai Shores ukuya kwiicingo ezinokuthi zibekho zabucala kunye ne-landscaping kwaye iya kuthatha indawo ye-walkway yangoku ejikelezayo ukuya ngaphambili. indawo ephakathi kwezakhiwo ezibini eziphambi kolwandle (iKauai neNiihau) nolwandle. Umhla wokuqala weprojekthi ye-3/28/22 kwaye iya kuhlala iinyanga ezi-2 kwaye ingaba mfutshane okanye ixesha elide, kuxhomekeke kwimozulu, imvume, njl.
Iindwendwe ziya kunikwa ikhowudi yofikelelo kunye neenkcukacha zoqhagamshelwano ukulungiselela abasebenzi bogcino lwendlu kunye nololongo.
Inombolo yomthetho: 430020130175